Soomaaliya, 13 March 2018
Talaado 13 March 2018
Wareysi: Faahfaahinta Dagaal ka Dhacay Bakool
Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay dagaallo maanta ka dhacay gobolka Bakool kuwaasi oo dhexmaray ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka al-Shabab
Madaxweyne Biixi oo Imaaraadka u Safray
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa safar aan hore loo shaacin maanta ugu kicitamay dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta.
Wakiillada Somaliland oo Meel Mariyay Heshiiskii DP World
Baarlamaanka Somaliland ayaa maanta jawaab ka bixiyay go’aankii Aqalka Hoose ee Baarlamanka dowladda federalka ee Soomaaliya uu shalay ku ansixiyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabta ee DP World.
Qeybdiid: Kuma Qanacsi Guddigii Madaxweyne Farmaajo
Aqalksa Sare ee baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta dib u dhigay ka doodista go’aankii uu shalay Aqalka Hoose ku ansixyay sharci ka mamnuucayay Soomaaliya shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta iyo heshiis kasta oo lala galay.
Warbixinno: Dagaallo Ka Dhacay Bakool iyo Jubbada Hoose
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in tuulada Wirkooy oo duleedka waqooyi ka xigta magaalada Kismaayo, uu dagaal muddo ku dhexmaray ciidamada Jubbaland oo ay wehlinayaan kuwa Kenya ee AMISOM; iyo maleeshiyo ka tirsan kuwa ururka al-Shabab.
Baarlamaanka oo Mamnuucay DP World
Baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan aqalkiisa hoose ayaa ansixiyey sharci saamaynaya dhammaan heshiisyada shirkadda DP World ka gashay Soomaaliya.
Shir Ku Saabsan Kalluumeysiga Soomaaliya oo Nayroobi Lagu Qabtay
Waxaa magaalada Nayroobi maalmahan ka socdey shir lagaga hadlayey kalluumeysiga Soomaaliya iyo sidii loo wadaagi lahaa dhaqaalaha iyo barnaamijo shaqooyin loogu abuurayo dhalinyarada.
Sacad Shire oo Wax laga Weydiiyey Heshiiska Berbera
Fadhigii golaha wakiillada Somaliland ee maanta waxa ay mudanayaashu su'aalo ku waydiiyeen wasiirro uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibedda Dr. Sacad Cali Shire, kuwaas oo badankoodu la xidhiidheen heshiiska dekedda Berbera
Baarlamaanka D. F. Somalia Maxaa Horyaalla?
Kal-fadhigii saddexaad ee Aqalka Baarlamaanka ayaa shalay ka furmay magaalada Muqdishu, waxaana la aamisan yahay inay horyaallaan shuruuc badan oo u baahan ansixinta xubnaha aqalka, waxaase dad badan is weydiinayaan baarlamaankani muxuu ku bixin doonaa waqtiga uu haysto.
Wasaaradda Isgaadhsiinta iyo teknoolajiyada Somaliland ayaa maanta soo saartay amar ay kaga mamnuucayso jaamacadaha, shirkadaha, bangiyada, urururrada maxalliga ah iyo kuwa dawliga ah inay adeegsadaan cinwaanka internetka ee Sooomaaliya ama DOT SO.
Soomaaliya: Guddiga Doorashooyinka oo Toronto Kulan ku Leh
Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa kulamo wada-tashiyo ah la qaadanaya qurba joogta Soomaalida si looga qeyb- galiyo aayaha dalka.